ADY AMIN’NY FAMPIASANA ANKIZY : Nitanisa ireo ezaka rehetra efa nataon’i Madagasikara ny Vadin’ny Filoha – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 12:52
Ny Vadin'ny Filoham-pirenena, Ramatoa Mialy Rajoelina.
Accueil/Songadim-baovao/ADY AMIN’NY FAMPIASANA ANKIZY : Nitanisa ireo ezaka rehetra efa nataon’i Madagasikara ny Vadin’ny Filoha
12 Jona. Anio no hanamarihana ny andro iraisampirenena ho an’ny ady amin’ny fampiasana ankizy. Omaly, nisy ny fihaonana natao ampitain-davitra nokarakarain’ny Governemanta frantsay sy ny Fikambanana iraisampirenena momba ny asa (OIT), izay nandraisan’ny Vadin’ny Filoham-pirenena anjara, Ramatoa Mialy Rajoelina.
Lucien R. 12 juin 2021
Mandray anjara feno amin’ny ady amin’ny fampiasana ankizy i Madagasikara, amin’ny alalan’ny Governemanta, ireo fiarahamonim-pirenena, Mpiara-miombona antoka ara-bola sy ara-teknika, hoy ny Vadin’ny Filoham-pirenena omaly, Ramatoa Mialy Rajoelina, nandritra ny fihaonana ampitain-davitra mahakasika ny fampiasana ankizy nokarakaraina omaly. Nametraka ho laharam-pahamehana io ady amin’ny fampiasana ankizy io i Madagasikara, hoy izy. Izany rahateo dia mifandray amin’ny tanjona fahenina amin’ny vinam-panandratana an’i Madagasikara, momba ny fanomezana asa mendrika ho an’ny rehetra. Betsaka ny asa efa natao saingy mbola lavitra ny vokatra. “22,1%-n’ireo zaza malagasy no tsy mba niaina araka ny tokony ho izy ny fahazazany. Izy ireo izay hita eny an’arabe, eny amin’ny toeram-pitrandrahana, eny an-tsaha, eny amin’ny toerana famakiana vato, eny amin’ny fivarotan-tena”, hoy i Mialy Rajoelina. Tsy laharam-pahamehana ho an’ny Ray aman-dReny sahirana mihitsy ny sekoly. Noho izany indrindra no nahatonga ny Fanjakana malagasy nanao ho maimaim-poana ny fisoratana anarana eny amin’ireo sekolim-panjakana, nanomboka ny taona 2020. Nisy koa ny fananganana sekoly manarapenitra any amin’ny distrika 119 mba hampirisihana ny fampidirana an-tsekoly ka hampihena ny fampiasana ankizy. Nohamafisina koa ny fanentanana momba ny fandrindram-piterahana mba hahafahan’ny Ray aman-dReny mitaiza sy mamelona araka ny tokony ho izy ny zaza naterany. Eo koa ny nametrahana ny tetikasa Avotse tany Atsimon’ny Nosy. Fokotany miisa 20 no nisitraka asa nahafahany namelona ny ankizy sy mba hampiarana azy ireo. Ary farany teo, nisy ny fananganana ozinina mamokatra sakafo any atsimo mba havitrika ny ankizy hianatra.
Ankizy maherin’ny 152 tapitrisa maneran-tany
Ny taona 2021 dia nataon’ny fivoriamben’ny Firenena Mikambana ho taona iraisampirenena ho fanafoanana ny fampiasana ankizy. Hatreto, mbola lavitra ny ezaka satria mbola maherin’ny 152 tapitrisa maneran-tany ny ankizy manao asa tsy mifanaraka amin’ny maha zaza azy, ary aty afrika atsimon’I Sahara no ampahany betsaka izany. Manodidina ny 22 000 eo ireo ankizy maty am-perinasa isan-taona. Tsy azo tsinontsinoavina ireto tarehimarika ireo, araka ny voalazan-dRamatoa Mialy Rajoelina. Etsy ankilany, noho ny fahantrana lalina, an-tapitrisany ireo ankizy miala an-daharana an-tsekoly, ary miasa mba hanampiana ny fidiram-bolan’ny Ray aman-dReny. Ankizy an-tapitrisany koa no ahina hiharan’ny tsindry sy ny herisetra ankehitriny.
Tamin’ny taona 2020, taorian’ny fifanaovan-tsonia niaraka tamin’ireo firenena mpikambana, ny fifanarahana laharana 182 an’ny OIT mahakasika endrika tafahoatran’ny fampiasana ankizy, dia efa lasa hampiharina maneran-tany. Izany dia manery ny tokony hisian’ny drafitra maty paika mba hanafoanana ny fampiasana ankizy. Marihana fa anisan’ny nandray anjara tamin’ny fifanankalozan-kevitra koa ny Tale Jeneralin’ny OIT, Guy Ryder, ny Ministry ny Asa Frantsay, Elisabeth Borne.
SABOTSY NAMEHANA: Hamokatra rano 90m³ isan’ora ny toby famokaran-drano vaovao
TOETRANDRO: Hanomboka hisy ny rotsak’orana amin’ny herinandro
Fanatanterahana velirano : Misongadina ny fampandrosoana ny Faritra Ihorombe
TETIKASA FIHARIANA 2020: 78 578 ireo asa niforona, maherin’ny 7 500 ireo mpisitraka
MORONDAVA MENABE : Mihamirongatra ny doro tanety sy ny fandripahana ala